Rikoooo.com - FS2004 Enyemaka
Nchịkọta ụlọ Mingbọ elu simulators Terminal Flight Simulator 2004
Microsoft Flight Simulator 2004 (FS2004) bụ egwuregwu vidio nke ụlọ egwuregwu Microsoft nke ewupụtara, ewepụtara na 2003 na PC. Gburugburu ụwa ndị mmadụ ka na-egwu egwu na FS2004 ọtụtụ iri afọ gachara.
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 3 posts • Peeji 1 of 1
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » 08 Jenụwarị 2017, 13:52
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu, njehie ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị ụfọdụ ajụjụ banyere FS2004 simulator, biputere ya ebe a. Ọzọkwa, gwa anyị banyere fixes na ngwọta maka dị iche iche na nsogbu na njehie na FS2004.
Jikọtara: Abụọ 18 Feb 2017, 08:23
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by mmickey » Abụọ 18 Feb 2017, 14:21
Ndewo M zụtara otu ngwugwu maka B777 maka nke m FSX si Rikooo na enweghị m ike imetụ FMS ma ọ bụ ogwe ọ bụla maka Mbido. Biko nyere aka.
Abụ m ihe ọhụrụ nye FSX. Daalụ.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by Dariussssss » Abụọ 18 Feb 2017, 16:29
Ana m eche ma m ga-anwa inyere gị aka. ...
Nke mbu, ebe ezighi ezi iju ajuju, nke a bu inye aka na FS2004, obughi FSX.
Nke abụọ, ụzọ i dere nke a, enweghị m ike ịghọta ya.
Nke atọ, nkọwa ndị ọzọ, nke ụgbọelu ka ị natara.
Nke anọ, echeghị m na ị zụtara ụgbọ elu ahụ ebe a. Dị ka m maara, ihe niile a bụ freeware.
3 posts • Peeji 1 of 1
Laghachi na “Flight Simulator 2004”